Ogaden News Agency (ONA) – Addisu Legese : Waxaad Tahay Diktaatoor Aan Dadkiisa u Roonayn oo isoo Xasuusiyay Dargigii – Noora Afgaab
Addisu Legese : Waxaad Tahay Diktaatoor Aan Dadkiisa u Roonayn oo isoo Xasuusiyay Dargigii – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ June 16, 2014
Waxaa mudo bil laga joogo yimid magaalada Godey iyo degmooyin ka tirsan gobalka Shiniile Raysul wasaare ku-xigeenkii hore ee Itobiya mr Addisu Legese iyo wafti uu hogaaminayo. Mr Addisu ayaa hada wuxuu chairman u yahay gudida ama boardhiga qaabilsan barnaamij iska magac u yaal ah oo layidhaahdo Federal Support ahna waxayaabaha aay faderalku ka taageeran kililada dib udhacay gaar ahaan meelaha dib u dajinta ay ka socoto.
Hadaba waftigan oo soo maray meelaha wabiga Shabeele ee dib u dajinta loogu talagalay kadibna sii maray degmoooyin katirsan gobolka Shiniile oy ka socdeen mashaariic noocan oo kale ah oo biyo galin ubadan ayaa markii ay booqashadaas dhameeyeen waxaay shir kula galeen magaalada Dirdhabe Cabdi iley iyo qaar kamid ah masuuliyinta kililka, waxaayna gabi ahaanba ku sheegeen warbixntii Kiliku usoo jeediyey mid been ah oo aayna waxba kajirin. Waxayna sheegeen inuu degaanku ka dhacay barnaamijka dib udajinta guud ahaan oon waxba laga qabanin. Arintan ayaa la ogaadday kadib markii uu kililka ka goostay una goostay magaalada Addis ababa madax xafiiseedkii xafiiska Waraabka iyo Dooxooyinka ee degaanka Soomalida, ninkaas oo ahaa dilaalkii ugu waaynaa ee u dhaxeyn jiray Cabdi iley iyo federalka marka lagahadlayo mashaariica dib udajinta. Waxaana la filyaa in uu ninkaasi sirobadan oo mashaariicdas ku saabsan bixiyey uuna siiyey dawlada federalka ah.
Waxaa kale oo iyana jirta in habeen dhaweyd ay koox liyuu boolis ihi jabiyeen habeen nimo ARCHIVEYADII xafiiskaas Waraabka iyo Dooxooyinka ka dibna ay kala baxeen dicumentiyo halkaas ku jiray, waxaana loo maleynayaa inay ahaayeen koox uu usoo diray Cabdi iley.
Sidoo kale Addisu Legese ayaa sheegey wakhtigii uu shirkaasi socday in uu Kilika kajiro masuqmaasuq baahsan. Ninkan ayaa wakhtigii uu yimid magaalada Godey wuxuu aad uga xanaaqay hadalo adgna ka yidhi markii uu arkay ardaydii dugsiyada magaalada Godey oo inta lasoo saaray tuban cadceeda wakhti aad u kulul ay ahayd oo la filay inay class ku jiraan ardaydan, hasa ahaatee loo soo safey in ay soo dhaweeyeen isaga iyo waftigiisa. Mr. Addisu ayaa markuu arkay dhibka haysta ardayda, Cabdi iley sitoos ah ugu yidhi waxaad tahay diktaatoor cadaw u ah dadkiisa xoogna u isticmaalaya, wuxuuna raaciyay, tusaale ahaan anigu kuma faraxsani ADRDAYDAN aad jidka soo tubtay wakhtigan kulul, waxaanan xusuustay wakhtigii dhargigii iyo waxyaabihii kalifay inaanu la dagaalano dhargigii taasoo ay kamid ahayd cadaadiska iyo noocan aad hada u dhaqmeysid.
Hadalkaas oo hadal weyn ah mr Addisu ayaa isugu ahaa dadka aad u neceb Cabdi iley wakhtiyadii hore laakiin Abay Sahaye ayaa mudo sanadka hor ah heshiiseyey Cabdi iley iyo mr Addisu, wakhtigaas oo uu ku yidhi mr Abay Sahaye war Addisow ninkan laheshii sanad walbana 20 million oo cash ah iska qaado. Hadaba mr Addisu ayaa wixii intaas ka danbeyey, socdaalkan kahor wuxuu kamid ahaa dadka sida tooska ah u ilaaliya Cabdi iley una difaaca. Waxaa hadda la sheegayaa in Mr. addisu uu cabdi iley ka gudbiyey dacwad adag.
Dhinaca kale waxaa maalin dhawayd loo diiday inay ka qayb galaan shirkii golaha fedreshinka oo lagaga hadlayey arimaha miisaaniyada sanadkan 2007 EC Mr Mubashir Dubad iyo afhayeenka ahna gudoomiyha xisbaga Mr Maxamed rashiid. Sababta loogu diiday ayaa ahayd Cabdi iley oon inta badan tagin shirarka Addis Ababa oo nimankaas wakiishay isagoo cuqdad ka qaba in uu ka qaybgalo shirarka loogu yeedho aqoondarada haysa darteed oo marar badan ku fashilnay inuu la socdo xogaha la’is dhaafsanayo eek u saabsan dawlada federalka.
Arimahaas aan kor ku sheegnay iyo waliba qaar kaloo badan iyo xidhiidhka masuuliyiinta sare ee Itobiya iyo Cabdi iley oo aad usii xumaanaya iyo waliba arintan cusub ee jidhka lagaga kicinayo dadka Soomalida ah iyo hawlo kale oo Cabdi iley culays ku ah, ayaa kalifay ama sabab u ah in uu Cabdi liyuu boolis galiyo Soomaliya iyo waliba sirdoonka itobiya oo dabagal adag ku haya dhaq dhaqaaqa Cabdi iley guud ahaan dal iyo dibad islamarkaasna soo tirakoobay hantida uu ku leeyahay dalka iyo dibada intaba guud ahaan iyo waliba danbiyada uu geestay oo ah mid loo soo bandhigi doono maalinta uu xilka katago.
Hadaba guud ahaan Cabdi iley ayaa aaminsan hadii uuna marba meel iyo dagaal ku wajahin Itobiya in uuna xilka habeen joogi karin. Arimahaas oo dhan ayaa kalifaya in uu kolba meel isku qaado, waxaana sidaas la aaminsan saaxiibkiisa General Abraham wolde oo ah ninka lataliya xukumana degaanka. Marka xaqiiqada laga hadlo ninkan waa ninka ay jeebkiisa gashay guud ahaan miisaniyada kililku 50% sitoos ah iyo sidadban labadaba. Arinta kale ee sii xumeyneysa xidhiidhka ka dhexeeya madaxda sare ee Itobiya iyo Cabdi iley ayaa waxaa kamdi ah qiimeyn lagu qiimeyey madax badan in xidhiidka ay Cabdi iley la leeyihiin uu yahay mid corruption ama musuqmaasuq ah taas oo hada kalifay in aayna xidhiidka ka goostaan xitaa afhayeenkii golaha federashinka mr Kasu.